FITSENANA AN’I PAPA : Hizara roa ny fiaingan’ireo mpino katolika avy eto Mahajanga
Hanainga ny maraina vao mangirandratsy aminy 02 ora manoloana ny fiangonana katedraly, izay fantatra fa hitondra ny lakroa masina ho an’ny diosezin’i Mahajanga, ireo delegasiona hanotrona ny fahatongavan’ny Papa. 2 septembre 2019
Mialoha izany anefa dia hisy ny sorona masina lehibe hiarahan’ireo mpino manatanteraka ao amin’io katedraly io ny alin’ny alahady 01 septambra mialoha ny hiaingan’ny lakroa araka ny fandaharam-potoana voasoritra. Horafetina eny Analamahitsy any Antananarivo ilay lakroa avy eo, satria hazo mbola misaratsaraka izy io miainga eto, izay vao entina ao amin’ilay kianja handraisana ny lamesa lehibe hataon’i Papa ray masina. Ny fiaingan’ny besi nimaro mahatratara hatraminy 5300 mpizaika dia ny alakamisy 05 septambra hihazo ny renivohitra hiatrika ny fivahinianan’i Papa, ny zoma 06 septabra izao.
Manoloana izany dia vita ny lamina hitandroana ny fandriampahalemana eny aminy lalam-pirenena fahaefatra iny. Tsy nahatombotsiraka mihitsy ny ao amin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety na ny Att, koa nisy ireo fivoriana in-telo miantoana niarahana tamin’ ireo zandarimiariam-pirenena sy ny tao aminy prefektiora ny faran’ny herinandro teo. Nahitam-piovana araka ny nambaran’i Toky Rahaingo Rafanomezan-tiana, talen’ ny Att eto Mahajanga ny vondron-tobim-pileovana hiantoka ny fiambenana eny amin’ny lalam-pirenena. Ka raha ny zandarin’ ny FIGN no niantoka ny fiambenana io hatramin’izay, dia ny vondrona CFS na ny Commendement force specialisé eny aminy tobin’ny zandary any Ivato indray no nandray izany amin’izao andro vitsy tsy ahatongavan’i Papa izao. Nihatra ny sabotsy 31 aogositra ny fiambenana ho an’ireo fiara manao ny zotra nasionaly, miainga avy eto Mahajanga mihazo ny renivohitra sy ireo midina aty Mahajanga ary koa ny lalam-pirenena fahaenina iny. Zandary enina no miantoka ny fiambenana miala eto Mahajanga, ary ny roa amin’izy ireo indray avy eo no mijanona eo Maevatanàna manohy ny fisafoana sy ny fitandroana ny fandriampahalemana amin’ireo jiolahy eny an-dalana. Dia torak’izany koa ny zandary manao savahao ireo fiara avy any an-drenivohitra hidina aty Mahajanga, izay ahitana zandary enina ihany koa izany. Miasa 24/24 ora eny andalam-be ireo zandary sasany manao ny savahao sy fisafoana ireo fiara mandritra ny fialan-tsasatra lehibe izao ho an’ny Rn4.
Araka ny fandaminana avy tamin’ny Att hatrany dia hatambatra tsifolofolo vao afaka mandray ny fiaingana ireo fiara, fa tsy mahazo mandeha irery eny an-dalana. Mijanona misakafo ao Ambondromamy izy ireo avy eo, ka rehefa vita izay dia misy ny barazy ataon’ny zandary eny aminy fiolanana Tsaratanàna, ka manomboka eo indray ny regroupement ho an’ireo fiara ho tsifolofolo vao miainga izy ireo mihazo ny renivohitra. Misy koa ny fisafoana na controle ataon’ireo zandary any Maevatanàna, no sady mametraka ireo zandary roa tamin’izy enina nanao ny fiambenana avy aty Mahajanga. Dia hifandimbidimby araka ny lamina napetraka ny tohiny.
Izany hoe tsy hianona fotsiny ny amin’ny fitsenana ny Papa izao ny fiantohana ny fandriampahaleman’ireo fiara mitrandraka ny zotra nasionaly Rn4 sy Rn6, fa hitohy hatramin’ny fialan-tsasatra lehibe ity hoy i Toky Rahaingo, talen’ ny Att- Mahajanga. Marihina fa efa mahanika hatraminy 554 no isan’ireo fiara ao aminy tobim-piantsonana etsy Aranta mitrandraka ny zotra nasionaly mampitohy an’i Mahajanga sy Antananarivo, miampy ireo fiara sokajiana ho kilasy faharoa. " Att, dia miasa sy mirary soa ho anao " no fanambin’izy ireo.
Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato FANDAVANA FIHIBOHANA (180) 27 mars 2020 Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (122) 31 mars 2020 Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA (114) 27 mars 2020 Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA (110) 27 mars 2020 Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano TSARASAOTRA (87) 27 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (80) 31 mars 2020